TuneUp Utilities 2011 Build 10.0.300(nyinaymin)
သုံးနည်းကတော့ ရေးထားပေးပြီးသားပါ . သုံးနည်းကတော့ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ . ညီလေးတစ်ယောက် တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ပို့စ်တစ်ပုဒ် တက်ဖို့ စိတ်ညစ်အောင် စောင့်နေရတာ မလွယ်ဘူးဗျာ . မေးထားတာတွေကိုလဲ ပြန်ဖြေပြီးတဲ့သူတွေလဲ ဖြေပြီးပါပြီ . မဖြေရသေးတဲ့ သူများကတော့ စောင့်ပြီး ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ် .
Regular maintenance increases the stability of your PC , but is complicated and takesalot of time when doing it manually. Spare yourself the stress! With TuneUp Utilities , you can clean up your computer and delete unnecessary files with only one click. Neat!
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:10 AM